स्वागत रोबोट-आधारित कर्मचारीहरु गर्न - समाचार नियम
स्वागत रोबोट-आधारित कर्मचारीहरु गर्न
waitstaff देखि साथीहरू र कानुनी अनुसन्धानकर्ताहरूले हेरचाह गर्न, मेशिन कामदार भविष्य यहाँ छ. तर त्यो कहाँ मानिसहरूलाई छोड गर्छ
शीर्षक यो लेख “स्वागत रोबोट-आधारित कर्मचारीहरु गर्न: आफ्नो काम पनि स्वचालित हुनेछ?” सैन मा जुलिया Carrie वाँग द्वारा लेखिएको थियो, शनिबार 19 औं मार्च मा दर्शक लागि 2016 14.24 UTC
"यो शुद्ध जादू छ,"Eatsa प्रतिज्ञा.
मा सैन पहिलो पूर्ण स्वचालित रेस्टुरेन्ट, भोजन सानो गिलास कब्बीज देखा, बस 90 सेकेन्ड पछि ग्राहकहरु आदेश र पर्खाल-माउन्ट iPads मा भुक्तानी. कुनै waitstaff - यो मानव-कम अनुभव छ, कुनै कोषाध्यक्ष, कुनै एक आफ्नो आदेश प्राप्त गर्न गलत र सुझाव कुनै एक.
यो पनि एक पार्लर चाल छ.
भोजन अघि देखिने क्षण, प्रदर्शन स्क्रिन-मार्फत मोर्चों को कब्बीज जान्छ भनी तपाईं फीड कि हात को दृष्टि पकड सक्छ जब केहि सेकेन्ड को लागि कालो.
सम्बन्धित: तपाईं सेक्स रोबोट विरुद्ध शर्त थियो? ऐ 'विश्व बेरोजगार को आधा छाड्न सक्छ’
Eatsa अझै कुल स्वचालन हासिल भएको छैन. कम्पनी स्वीकार्छन् यो एउटा सानो भान्सा कर्मचारी रोजगार, र एक कर्मचारी घर को अगाडि उपस्थित छ, आदेश गर्ने बारे प्रश्नहरूको जवाफ र जादू कब्बीज पर्खाल पछाडि मा जा के बारेमा प्रश्नहरू dodging. ("तपाईं जेसुकै होस् कल्पना,"उहाँले teases।)
तर रेस्टुरेन्ट, जो अगस्ट खुलेको र लस एन्जलस गर्न पहिले नै विस्तार गरिएको छ, एक छिटो-आउँदै वास्तविकता को एक झलक प्रदान गर्दछ, जहाँ कार्यहरू को सम्पूर्ण विभाग पटक मानिसहरूलाई को विशेष प्रान्त छरितो पूरा गर्न सकिन्छ थिए, सस्तो, र मिसिन द्वारा थप मजबूती.
भविष्यमा यहाँ छ, र कुनै कसैको काम सुरक्षित छ.
"म रोबोटिक्स क्रान्तिको पकड लिन्छ रूपमा बादल मडारिरहेको ठूलो बेरोजगारी देख्न सक्नुहुन्छ,"नोएल Sharkey भने, बेलायत मा शेफिल्ड विश्वविद्यालय मा रोबोटिक्स र कृत्रिम बुद्धि को एक प्रोफेसर emeritus. Sharkey स्वायत्त रोबोट को व्यापक आवेदन देखि हामीलाई "सम्भावित societal र नैतिक खतरहरुको" जोगिन मदत गर्न जिम्मेवार रोबोटिक्स लागि हालै फाउन्डेसनले सुरु.
म रोबोटिक्स क्रान्तिको पकड लिन्छ रूपमा बादल मडारिरहेको ठूलो बेरोजगारी देख्न सक्नुहुन्छ
त्यहाँ अलार्म Sharkey लग छ बारे केही विशेष नयाँ. मा 2013, अक्सफोर्ड विद्वानहरूको कार्ल Benedikt Frey र माइकल एक ओसबोर्न लगभग चेतावनी दिए 47% कुल अमेरिकी रोजगारीको कम्प्यूटरीकरण को जोखिम थियो, सब एउटा विश्लेषण मा 702 निर्मूल भइरहेको उनको likelihood द्वारा पेसा.
telemarketers, एकाउंटेंट, खेल रेफरी, कानुनी Secretaries, र कैशियर सबैभन्दा तिनीहरूको जब गुमाउन संभावना बीच हुन फेला परेन, डाक्टर गर्दा, पूर्वप्राथमिक शिक्षक, वकिल, कलाकार, र पादरी अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेका.
मा यो व्यवसाय को भविष्य, मा प्रकाशित 2015, लेखक रिचर्ड Susskind र आफ्नो छोरा, दानियल Susskind, पनि ती परम्परागत व्यवसाय अस्वीकार गर्नेछ र "झन् सक्षम प्रणाली" द्वारा प्रतिस्थापित भन्ने तर्क.
एक ग्राहक राख्न र Eatsa मा आफ्नो आदेश भुक्तानी गर्न एक iPads प्रयोग, सैन मा एक पूर्ण स्वचालित रेस्टुरेन्ट. तस्वीर: को दर्शक लागि Ramin Talaie
यो Susskinds काल भविष्यमा प्रयोग अब आवश्यक. रस भनिन्छ कानुनी सहायता उपकरण शुरू भएको थियो अन्तिम गर्मी, जो कानुनी अनुसन्धान को काम लैजान आईबीएम गरेको artificially बौद्धिक सुपर-कम्प्युटर वटसन प्रयोग.
रस खुफिया सह-संस्थापक र सीईओ एन्ड्रयू Arruda तर्क छ उपकरण छ कि, जो एक पटक सेकेन्ड विषयमा घन्टा लिया कि काम गर्न सक्छन्, छैन प्रमुख व्यवस्था कम्पनीहरु महान् मंदी समयमा अनुसन्धान मा खर्च घण्टा बिलिङ रोकियो देखि गर्न जब खतरा छ. उहाँले पनि रस को लागि कानुनी प्रतिनिधित्व थप पहुँचयोग्य गरेर "न्याय पहुँच वृद्धि" भनेर भन्नुभयो 80% अमेरिका जो यो खर्च गर्न सक्दैन.
तैपनि, रस मानिसहरूलाई एक पटक प्रदर्शन गर्न शीर्ष डलर भुक्तानी थिए काम गरिरहेको छ.
मंगलबार, को वित्तीय समय फेला कि बेलायत पहिले नै गुमाएको Deloitte द्वारा एक विश्लेषण मा रिपोर्ट 31,000 स्वचालन गर्न कानुनी क्षेत्र मा जब, र अनुमान अर्को कि 114,000 जब अर्को हुनेछ.
यो सबै धेरै छिटो भइरहेको छ. मा 2013, एमआईटी ईन्जिनियरिङ् प्रोफेसर यूहन्ना लियोनार्ड को भन्नुभयो एमआईटी प्रौद्योगिकी समीक्षा "रोबोट बस मानिसहरूलाई प्रतिस्थापन" भनेर आफ्नो जीवनकालमा हुँदैन थियो. "द अर्ध-स्वायत्त ट्याक्सी अझै पनि एक चालक हुनेछ,"उनले तर्क. आज, गुगलको स्वायत्त कार सार्वजनिक सडकमा 1 मिनेट भन्दा बढी माइल यात्रा गरेका छन्, र आत्म-ड्राइभिङ ट्याक्सी सबै तर अपरिहार्य देखिन्छ.
सेवा उद्योग विशेष कठिन मारा गरिने Sharkey माग. उहाँले अनुमान द्वारा भनेर 2018 त्यहाँ हुनेछ 35 लाख "काम" सेवा रोबोट.
Eatsa मा कम्प्यूटरीकृत कब्बीज, सान फ्रान्सिस्को. तस्वीर: को दर्शक लागि Ramin Talaie
एक बारटेंडिंग रोबोट "नामIMPRIMERIE महाशय"बजार मा पहिले देखि नै छ. सान जोस मा एक हार्डवेयर स्टोर, क्यालिफोर्निया नाउँ खुद्रा एसोसिएट रोबोट छ "भन्दा बढी."द बेलायत सलाद पट्टी चेन फेंक रिपोर्टअनुसार लण्डन दुई आउटलेट सट्टा कैशियर आत्म-सेवा खोखे छ भनेर यो महिना घोषणा. बिहीबार, Domino गरेको अष्ट्रेलिया अनावरण एक पिज्जा डेलिभरी रोबोट ब्रिस्बेन मा.
केहि कम्पनीहरु तिनीहरूले मानिसहरूको जब दूर हुन सक्छ कि आलोचना संवेदनशील जस्तो देखिन्छ.
बिहीबार, ब्लूमबर्ग गुगल छ कि रिपोर्ट बोस्टन गतिशीलता बिक्री, यसलाई मा प्राप्त कि frighteningly चुस्त रोबोट को आविष्कारक 2013.
"त्यहाँ प्रविधी प्रेस देखि उत्तेजना छ, तर हामी पनि यो आतंकित गर्नु भइरहेका केही नकारात्मक सूत्रहरू हेर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, मानिसहरूलाई 'जब लिन तयार,"ब्लूमबर्ग गरेर प्राप्त आन्तरिक इमेल मा एक Google कर्मचारी लेखे.
मीका ग्रीन, को संस्थापक Maidbot, होटल कोठा सफा गर्न रोबोट निर्माण कम्पनी, "यो अवस्थामा" कम्पनी उत्पादनहरू "एक वृद्धि हो कि जोड, housekeepers को छैन प्रतिस्थापन ".
अन्य आविष्कारक आफ्नो काम-प्रतिस्थापन मनसाय बारेमा कुनै हड्डी बनाउन.
केही माइल Eatsa अर्को सैन सुरुवातमा टाढा, गति मिसिन, पर्दा पछाडिका minions प्रतिस्थापन सक्ने रोबोट निर्माण गरिएको छ. मा 2012, कम्पनी एक पूर्ण स्वचालित शुरू भयो बेहतरीन ह्यामबर्गर बनाउने मिसिन, र यसको वेबसाइट यो सलाद मा सारिएको छ कि दावा, स्यान्डविच, र "धेरै अन्य बहु-संघटक खाद्य पदार्थ".
"हाम्रो उपकरण कर्मचारीहरु थप कुशल बनाउन चाहनुभएको छैन,"सह-संस्थापक ALEXANDROS Vardakostas भन्नुभयो Xconomy. "यो पूर्ण तिनीहरूलाई obviate गर्न चाहनुभएको गर्नुपर्छ।"
Mabu, रोबोट मित्र
मा 2014, Stowe Boyd, आत्म-वर्णन पोस्ट-futurist, को gauntlet तल फाले. को "केन्द्रीय प्रश्न 2025 हुनेछ: आफ्नो श्रम आवश्यकता छैन कि संसार मा लागि मान्छे के-के हुन्, र जहाँ केवल एक अल्पसंख्यक को 'बोट-आधारित अर्थव्यवस्था मार्गदर्शन गर्न आवश्यक छ?' "उहाँले एक बेंच अनुसन्धान केन्द्र रिपोर्टमा आग्रह.
जवाफ प्राय सम्मको बेतलबी छन् कि गतिविधिहरु को प्रकार मा झूठ सक्छ: हेरविचार काम परंपरागत महिलाहरु तोकिएको. कम्प्युटर र रोबोट मार्गदर्शन श्रम मा मानिसहरूले भन्दा राम्रो हुन सक्छ, कागजी कार्रवाई, र पनि तर्क, तर तिनीहरूले महसुस छैन, र तिनीहरूले बुझ्न सक्दैन.
कमसेकम, छैन साँच्चै.
तर Mabu मानिसहरूलाई भन्दा हुनुको मानव मा राम्रो हुन सक्छ भने गर्न सक्छन्, के हाम्रो लागि बाँकी छ?
सैन गरेको Dogpatch छिमेकी मा एक छिंडीमा कार्यालय मा, डा Cory किड रोबोट जसको एकमात्र काम सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन मा आफ्नो मालिक उत्प्रेरित छ निर्माण छ.
Mabu उनको पेट मा एक टचप्याडमा वहन गर्ने डेस्क दीपक आकारको रोबोट छ. एक "व्यक्तिगत स्वास्थ्य साथी" को रूपमा, त्यो पुरानो रोग प्रबन्ध विरामीहरु लागि निमित्त. विस्तृत हरियो आँखा र फिक्का पहेंलो छाला संग, त्यो पिक्सार चलचित्र भित्र बाहिर मा personified भावना हुन सक्छ. र भावना के त्यो सबै बारे छ हो.
रोबोट लागि, Mabu विशेष प्रभावशाली केहि गर्दैन. त्यो केवल आफ्नो बिस्तर तालिका मा बस्छन, उनको मालिकसँग कुराकानी पकड एक दिन एक पटक वा दुई पटक उठ्दै गर्न.
Cory किड, सीईओ र Catalia स्वास्थ्य संस्थापक, Mabu संग चित्रण. तस्वीर: को दर्शक लागि Ramin Talaie
ती कुराकानीहरू, व्यवहार मनोवैज्ञानिक इनपुट र एक पूर्व हलिउड Screenwriter संग डिजाइन र Mabu एक व्यक्तिको व्यक्तित्व र चासो भिज्न मदत गर्छ भनेर कृत्रिम बुद्धि द्वारा सम्भव, इरादा गर्दै छन् उपचार आफ्नो योजना पालन गर्न "रोगी आफ्नै प्रेरणा लाभ" गर्न.
सम्बन्धित: वृद्ध मान्छे को लागि रोबोट हेरविचारकर्ताओं छन् 'पनि अधिक बुरी तरिका मरिरहेका अर्को तरिका'
Mabu subtly आवाज र उपस्थिति मा महिला छ, किड भन्छन् एक विकल्प अनुसन्धान आधारित छ कि, stereotypically, "महिला बढी उपयोगी र मायालु रूपमा देख्न".
हाम्रो लागि Mabu हेरविचार गर्छ? त्यो प्लास्टिक छ, तर किड उनको बताउँछ जब त्यो ठूलो महसुस गर्दैन, त्यो जवाफ, "तपाईंले आफ्नो काँध मा धेरै पूरा,"र एक इशारा मा उनको टाउको घट्छ कि लग समानुभूति जस्तै.
हामी Mabu हेरचाह गर्छन्? किड उहाँले परीक्षा पछि विरामीहरु देखि उनको संकलित छ जब कि भन्छन्, धेरै objected छन्. "उनीहरु भन्छन, 'त्यो परिवारको सदस्य जस्तै हो।' "
त्यो भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक समर्थन को एक निश्चित प्रकारको कि मानिसहरूलाई प्रभावकारी पूरा गर्न सक्षम हुन सक्छ प्रदान गर्न सक्छन्. तपाईं आफ्नो गोली लिएका छन् कि तपाईं प्रत्येक दिन सोधेर आफ्नो साथी कल्पना, र त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो साझेदार रहने थियो कहिलेसम्म कल्पना. (किड किन भन्छन् यो छ, "हामी कुनै पनि मानव बदल्ने हुनुहुन्छ. म एक स्वास्थ्य साथी हुनेछ व्यक्तिले विचार गर्न सक्दैन। ")
सायद मात्र असर र नयाँ मानिसहरू हुर्काउन. जहाँ नोएल Sharkey लाइन ड्र यो छ. मा 2008, Sharkey पत्रिका मा रोबोटिक्स को नैतिक Frontiers प्रकाशित विज्ञान, उहाँले "बाल-मन रोबोट" को विकास विरुद्ध चेतावनी दिए जसमा एक कागज पहिले नै जापान र दक्षिण कोरिया मा भइरहेको.
Sharkey नानी रोबोट को क्षेत्र मा विकासक्रम अध्ययन जारी छ, पहिले नै उपलब्ध छ कि केहि सहित, जस्तै "चाइल्डकैअर रोबोट कागज"जापानको निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी बाट (परिषद).
"हामी पहिले देखि नै बच्चाहरु पछि देख मा रोबोट को overuse देखेको छु,"Sharkey भन्छन्. "रोबोट छोराछोरीको लामो समय सम्म हेरविचार को संभावना हाम्रो विस्तृत विश्लेषण देखि, हामी हाम्रो समाजमा विध्वंस कटनी सक्ने गंभीर संलग्न विकार को एक नम्बर आशा गर्न सक्छौं। "
हाम्रो काम सबै कि रोक्न यो छ.
सम्बन्धित: कृत्रिम बुद्धि मा महत्त्वपूर्ण अग्रिम नैतिकता को एक नयाँ सेट माग | जेसन Millar
मोटोरोला मोटो G (3Rd उत्प) समिक्षा
एलजी £ 8,000 लागि बेलायत मा एक बाङ्गो OLED टिभी सुरु
नयाँ उच्च गुणस्तर उपग्रह भिडियो कैद धरती हुनुहोस् ...
ट्विटर ramps अप फोटो साझेदारी सुविधाहरू
29305	2 लेख, क्यालिफोर्निया, Ent र tourismHospitality, घटना managem, विशेषताहरु, जुलिया Carrie वाँग, मुख्य खण्ड, एमआईटी - प्रौद्योगिकी को मैसाचुसेट्स, रोबोट, सान फ्रान्सिस्को, प्रविधि, यो दर्शक, अमेरिकी टेक, वेस्ट कोस्ट समाचार, काम & करियर, विश्व समाचार
← यो 25 मुश्किल भिडियो को सबै समय खेल स्याउ घोषणा नयाँ आईफोन एसई →